Chromecast 2: ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တူညီသောစျေးနှုန်း | Androidsis ပါ
Alexis Martinez | | အခြားကိရိယာများ
ယနေ့မျက်စိအားလုံးသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၌ရှိနေပြီး Google သည် Nexus ထုတ်ကုန်သစ်များကိုမိတ်ဆက်ရန်၎င်း၏အခမ်းအနားကိုကျင်းပနေသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း Nexus terminal နှစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြလိမ့်မည်၊ သို့သော်အခြားအံ့သြဖွယ်ရာများလည်းကျသွားနိုင်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ Chromecast အသစ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း Google ၏ streaming device နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာရှိခဲ့သည်။ အဲဒါကငါတို့ကပထမမျိုးဆက်ရဲ့နှစ်နှစ်ဖြစ်နေပြီ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့် Google သည်ထုတ်ကုန်ကိုသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်စဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့ကွန်ဖရင့်၌ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်နီးစပ်သူများက Chromecast2ကိုတွေ့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအမည်ပေးသောအခါကောလာဟလများသည်ကွန်ယက်မှတဆင့်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ဤ HDMI dongle အသစ်သည်ပထမဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီက device ၏ပထမဆုံးပုံများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့ပြီးယခု၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချို့ကိုငါတို့သိသည်။
ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအသစ်အဆန်းအနေနှင့်ယခုအရောင်ကိုအနက်၊ အဝါနှင့်အနီရောင်သုံးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤအရာသည်နောက်ထပ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Chromecast2သည်ပိုမိုမြင့်မားသော resolution ရှိလိမ့်မည် y ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ပထမမျိုးဆက်ထက်ငါတို့ကဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်နိုင်တယ် 4K တွင်လွှင့်သည်မရ။ နောက်ဆုံးတွင်ဤသို့ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်5GHz Wi-Fi ကွန်ယက်များနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအကြောင်းပိုမိုကောင်းမွန်သော chipset တစ်ခုတပ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငါတို့သိတာကသူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကပထမမျိုးဆက်နဲ့တူမယ့်စျေးနှုန်းဘဲ။ 35 ယူရိုမရ။ စက်ပစ္စည်းအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ Google Chrome ၏ dongle ကဲ့သို့အကြောင်းအရာများအားရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ Android Chromecast application သည်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ထို့အပြင်နောက်ထပ်အံ့သြစရာတစ်ခုသည် Chromecast အမှတ်တံဆိပ်အောက်သို့ကျရောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် search engine ၏ streaming device အသစ်ကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် 9to5Google portal သည်ဗားရှင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းပေါက်ကြားခဲ့သည်။ Chromecast အသံမရ။ ၎င်းကိုတီဗွီ၊ ကားစပီကာစသည့်မည်သည့် standard speaker များနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနည်းငယ်သတိရစေသောကြောင့်ဤ Google ကိရိယာအသစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရပါလိမ့်မည်။ Nexus မေး.
သင်သိသည့်အတိုင်း Google သည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုကိုစပိန်စံတော်ချိန် ၁၈း၀၀ တွင်ကျင်းပသည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ YouTube ချန်နယ်မှတဆင့်လိုက်နာနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်အားလူမှုကွန်ရက်များနှင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည်။ သင်တို့အား၎င်း၊ ဒီ Chromecast အသစ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Chromecast 2, ပိုမိုမြင့်မားသော resolution, ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတူပင်စျေးနှုန်း
Tablet Teclast X10 HD 3G ကပေးတဲ့အရာအားလုံး၊ ယူရို ၂၀၀ ကျော်လောက်အတွက် DualBoot တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါတယ်